NBA Jam maimaim-poana amin'ity volana ity noho ny IGN | Vaovao IPhone
Free NBA Jam amin'ity volana ity noho ny IGN. Atorinay anao ny fomba ahazoana azy.
Betsaka ny lalao tsara ao amin'ny App Store, tsy misy misalasala an'izany, fa maro amin'izy ireo no tsy manana fanaraha-maso mora na ara-dalàna. Ohatra, ny filalaovana FPS (mpitifitra voalohany) dia tsy mahazo aina mihitsy eo amin'ny efijery mikasika, fa, soa ihany fa misy lalao hafa mamela antsika hankafy fotoana tsara amin'ny fanaraha-maso tsotra nefa mbola lalao mahafinaritra. ny Iray amin'izany ny lalao IGN amin'ity volana ity: NBA Jam.
NBA Jam dia lalao iray, araka ny anarany, ny NBA. Ao anatin'izany dia tsy maintsy mifehy mpilalao iray amin'ny ekipantsika roa isika, satria amin'ity lalao ity dia hilalao roa mifanohitra amin'ny roa isika. Ny tena mahavariana dia ny haben'ny lohan'ny kintana NBA, iza izy ireo fa tsy "mpisolo toerana", na ny dunks mahatalanjona izay ho hitantsika amin'ny fotoana rehetra. Raha tsy misy fisalasalana, dia ilaina ny manandrana ary vao mainka izao isika afaka mahazo azy io maimaim-poana noho ny IGN.
Mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy manaraka dingana vitsivitsy isika, satria mbola karamaina ny lalao raha miditra amin'ny App Store isika. Ny IGN, raha tsy fantatrao, dia manolotra kilalao maimaim-poana anay isam-bolana ary ny lalao amin'ity volana ity dia ny NBA Jam. Mba hahatratrarana izany dia araho ny dingana etsy ambany.
1 Ahoana ny fampidinana maimaim-poana NBA Jam
1.1 Raha any amin'ny firenena tsy misy fampiroboroboana ianao dia andramo izao manaraka izao
Ahoana ny fampidinana maimaim-poana NBA Jam
Mifindra any amin'ny Tranokala IGN (tsara kokoa avy amin'ny iPhone)
Nilalao izahay ATAOVY CODE MAIMAIMPOANA
Izahay dia nilalao tao amin'ny fehezan-dalàna
Hitondra antsika any amin'ny App Store io. Nilalao izahay fifanakalozan (amiko dia toa OK izany satria efa nanavotra azy aho)
Pohy toy ny adala ilay harona!
Raha any amin'ny firenena tsy misy fampiroboroboana ianao dia andramo izao manaraka izao
Handeha SmartHide Online Anonymizer avy amin'ny Safari an'ny iPhone / iPad / solosainao
Safidio ny iray amin'ireo safidy. Raha tsy mandeha ilay voalohany dia mandehana any amin'ny US anonymizer. Raha misafidy ny safidin'ny anonymizer US ianao dia tsy maintsy apetrakao ao anaty boaty fifampiresahana ny URL ary kitiho ny «Atombohy ny fitetezana».
Apetraho ny adiresy http://www.ign.com/prime/promo/nba-jam-free ary tsindrio ny bokotra maitso
Tokony hisy ny kaody
Nandinika ny lalao nandritra ny fotoana fohy aho ary ny tena marina dia tena mendrika izany. Hafahafa ny tsy nahafantarako azy, fa farafaharatsiny mba ananako izao ary, misaotra ny IGN, afaka tanteraka. Inona no andrasanao hisintona azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Free NBA Jam amin'ity volana ity noho ny IGN. Atorinay anao ny fomba ahazoana azy.
Any Venezoela aho ary tsy avelako hahazo ny kaody! Raha misy olona tsara fanahy ka mandefa iray ho ahy? Ny mailako dia dorta90@gmail.com na amin'ny whatsapp +584242047128 dia tiako io
Yamil rivera dia hoy izy:
Tsy misy amin'ny PR taniko
Mamaly an'i Yamil Rivera
«Raha any amin'ny firenena tsy misy fampiroboroboana ianao dia andramo izao manaraka izao
Mandehana any amin'ny SmartHide Online Anonymizer avy amin'ny Safari an'ny iPhone / iPad / solosainao
Tokony ho misy ny kaody »
CoBe Alemanina dia hoy izy:
Mipetraka any Andorra aho ary milaza amiko fa tsy misy izany any amin'ny fireneko. Misy vahaolana ve?
Mamaly an'i CoBe Alemanina
Julian Toledo dia hoy izy:
Raha tsy misy izany any amin'ny firenenao dia mifandraisa amin'ny alàlan'ny VPN ary tereo ny fifandraisana amin'i Etazonia ... Ampirisihiko ny VPN "hello!" (Alaina amin'ny hello.org izy io ho fanitarana ny chrome na Firefox ary mandeha tsara izany).
Valiny tamin'i Julián Toledo
Saul Eduardo Romero Angeles dia hoy izy:
Tsy mandeha ilay izy satria tsy maintsy manana kaonty paoma avy amin'ireo firenena misy ianao
Valio amin'i Saul Eduardo Romero Angeles
Carlos Gomez dia hoy izy:
Valiny tamin'i Carlos Gómez
Safidy iray hafa izay ilaina hahazoana ny kaody dia mety ny plugin ZenMate ho an'ny Chrome.
Peter M dia hoy izy:
Tsy mandeha amin'ny fomba mitovy amin'ny firenena nisy ny fampiroboroboana, tsara izay nivoaka tao amin'ny fivarotana paoma, avy any Ekoatera aho.
Valiny tamin'i Peter M
Keneth Guillermo De León Echevarria dia hoy izy:
Kaody efa nampiasaina
Valiny tamin'i Keneth Guillermo De León Echevarria
Proxy an'ny fisintomana maimaimpoana avy amin'ny applestore ary mamorona kaonty maimaimpoana amin'ny fivarotana usa.
Antonio Morales P dia hoy izy:
Vonona ny namana, misaotra betsaka. Mipetraka any Mexico aho ary efa lalaoviko hehehe
Valiny tamin'i Antonio Morales P
Oliver Garcia dia hoy izy:
Misintona .. Misaotra
Valiny tamin'i Oliver García
Daniel cardozo dia hoy izy:
Tsy mety amiko izany
Valiny tamin'i Daniel Cardozo
Albin dia hoy izy:
Efa azoko io eto avelako ny iray ho any atsinanana tsara tarehy handray azy. Ankafizo. 64X39TT4AKP4
Mamaly an'i Albin
asdasd dia hoy izy:
Tsy ampifanarahana amin'ny famahana ny iPad (miseho eo ankavanan'ny farany ambany ny marika 1x ...)
Mamaly an'i asdasd
tsy mandeha amin'ny anonymizer ho an'ny apple apple store ... inona ny fako
Raha mandeha izy dia toa tsy mety ny ataonao.